Cristiano Ronaldo Oo Si Maldahan U Sheegay Sii Joogida Manchester United
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo oo si maldahan u sheegay sii joogida Manchester United
May 14, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Weeraryahanka Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa si maldahan u sheegay inuu sii joogi doono kooxda xagaagan, iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu ka tagi karo Old Trafford.
Ronaldo iyo United ayaa soo maray xilli ciyaareed niyad jab leh 2021-22, inkastoo 37 jirkaan uu dhaliyay 24 gool 38 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan tan iyo markii uu kooxda kaga soo laabtay Juventus bishii Ogosto.
Natiijadii xilli ciyaareedka niyad jabka leh ee Red Devils, kooxdu waxay weyday koob xilli ciyaareedkii shanaad oo xiriir ah, iyadoo sidoo kale seegtay u soo bixitaanka Champions League 2022-23.
Fashilkan oo kale ayaa keentay in ay soo baxaan warar sheegaya in weeraryahanka reer Portugal uu doonayo inuu kooxda ka tago xagaaga, laakiin ka dib markii la xaqiijiyay magacaabista tababaraha Ajax Erik Ten Hag oo qandaraas seddex sanno ah ka saxiixday xilli ciyaareedka soo socda, Ronaldo ayaa ka dhawaajiyay inuu halkaas joogi doono. ka hoos ciyaar 52 jirka.
Isagoo la hadlayay kooxda warbaahinta United ee ku saabsan magacaabista ninka reer Holland, Ronaldo ayaa yiri: “Waan ogahay inuu shaqo cajiib ah ka soo qabtay Ajax, iyo inuu yahay tababare khibrad leh, laakiin waa inaan siinaa waqti.
“Arrimuhu waa inay bedelaan sida uu doonayo, haddii uu wax wanaagsan sameeyo, dhammaan Manchester United waxay noqon doonaan kuwo guuleysta, sidaas darteed waxaan u rajeynayaa wanaag, dhammaanteen waan faraxsanahay waana faraxsanahay, kaliya maaha ciyaartoy ahaan, laakiin taageere ahaan sidoo kale, waa inaan aaminsanahay. in sanadka soo socda aan ku guuleysan karno koobab.”
Isagoo dib ugu soo biiray United ku dhawaad ​​13.5 milyan ginni heshiis labo sano ah xagaagii hore, Ronaldo wuxuu galayaa 12-kii bilood ee ugu dambeeyay qandaraaskiisa June, inkastoo ay weli jirto ikhtiyaar sanad kale ah oo sidoo kale la kicin karo.